Ciidamo Ruush ah Oo lagu dilay gobolka Deyru-Zuur ee dalka Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ciidamo Ruush ah Oo lagu dilay gobolka Deyru-Zuur ee dalka Suuriya.
On Sep 5, 2017 213 0
Dagaallo culus oo ka socoda gobolka Deyru-Zuur ee dhaca bariga dalka Suuriya ayaa lagu soo waramayaa in lagu diley ciiidamo Ruush ah oo kamid ah kuwa duulaanka ku jooga wadankaas muslimka ah.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda difaaca dowladda Ruushka ayay ku sheegtay in labo Askari oo ciidamadeeda katirsan lagu dilay dagaallada ka socoda duleedka magaalada Deyru-Zuur oo ah magaala madaxda gobolkaas.
Bayaanka waxaa lagu sheegay in dagaalyahannada Mujaahidiinta ee Suuriya jooga ay Hoobiyo ku garaaceen goob ay ku sugnaayeen ciidamadan, taas oo keentay in durba hal Askari uu goobta ku quur baxo, iyadoona midka kale uu mar dambe u geeriyooday dhaawicii soo gaaray.
Dhimashada 2 Askarigan ayaa ka dhigeysa tirada guud ee ciidamada Ruushka looga dilay Suuriya tan iyo sanadkii 2015 34Askari, marka loo eego tirada ay sheeganeyso dowladda Ruushka, balse waxaa la rumeysanyahay in boqollaal Askari oo Ruush ah dalkaas ay ku dhinteen.